Kukhuthazwe ezokuvakasha e-Greater Edendale | News24
Kukhuthazwe ezokuvakasha e-Greater Edendale
ISITHOMBE:sithunyelwe UMnyango wezokuVakasha ngokuhlanganyela neMsunduzi Pietermaritzburg Tourism Association bathule ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukiswa kwezindawo zokuvakasha namabhizinisi amancane eGreater Edendale. Kusukela kwesokunxele uNks
OYISEKELA likaNgqongqoshe wezokuVakasha kuleli uNksz Tokozile Xasa usenxuse imiphakathi ukuthi ibambe iqhaza ekuthuthukiseni izindawo zokuvakasha ezindaweni ohlala kuzona.
UXasa ukusho lokhu emva kokuba uMnyango wezokuVakasha ngokuhlanganyela noMsunduzi Pietermaritzburg Tourism bethule ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa ezokuvasha namabhizinisi amancane kwi-Greater Edendale ngempelasonto.
Lo mcimbi oqale e-Old Prison waphelela eSodubo guest lodge eCabazini eSigodini bekuhloswe ngawo ukugqugquzela izimboni zokuvakasha ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini.
UXasa uqhube ngokuthi kubalulekile ukuthi izinhlaka zokungcebeleka ezakhele imiphakathi zibambe iqhaza ekuthuthukiseni imboni yezokuvakasha, njengoba umnotho omningi wakuleli uqhamuka embonini yezokuvakasha.
Uthe yize zikhona izinhlelo zokuthuthukisa ezokuvakasha kuleli ezifana noTourism Buddies lapho kuqeqeshwa intsha enomatikuletsheni ukuba ingene kule mboni, leli zwe kusafanele lisebenze kanzima ekuthuthukiseni imboni yezokuvakasha ezindaweni zasemakhaya.
Uthe leli zwe lingenza kangcono ngokubukela ezweni iMalaysia lapho kunohlelo lapho izivakashi eziqhamuka emazweni ehlukene zivakashela izindawo zasemakhaya nasemalokishini ukufunda ngesikompilo nokudla kwakhona.
“Leli zwe lingenza kangcono kakhulu kune Malaysia uma nje kungaba khona ukusebenzisana kwezivakashi nezindawo zokungcebeleka zasemakhaya. Imboni yezokuvakasha ikhula ngesivinini kanti idlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakuleli.
“Le mboni iphinde ibe ngezinye ezisohlwini lezinto ezibalulekile ngaphansi kweKwaZulu-Natal Provincial Growth and Development Strategy,” kuphetha uXasa.
UMqondisi weMsunduzi Pietermaritzburg Tourism uMnu Dumisani Mhlongo uthe kusukela ngo-2012 le nhlangano ibisebenzisana nabanikazi bezindawo zokuvakasha emalokishini nasemakhaya ukuze bahlinzekele izivakashi ngezindawo zokuhlala nezinto zokuthutha.